İmamoğlu oo London ku yaal oo Raadinaya Maalgelinta Mashaariicda Istiraatiijiyada Magaalada Istanbul | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu ee London wuxuu raadsanayaa maalgalinta Mashaariicda Metro ee Magaalada Istanbul
15 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
imamoglu london wuxuu raadiyaa maalgelin mashruucyada metro ee Istanbul
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu la kulmay wakiilo ka socday 22 hay’ado dhaqaale oo kala duwan maalintii ugu dambeysay ee xiriiriyaashiisa London. Imamoglu wuxuu xusay mashruucyada iyo bartilmaameedka ay rabaan inay ku sameyaan Istanbul waxayna yiraahdeen, olarak Sida degmo degmo leh miisaaniyad isku dhafan oo u dhow 10 bilyan Euro, waxaan rabaa inaad aragto sawirka: Istanbul, oo quudiya fursadaha maalgashi, wuxuu leeyahay awood sare waxaadna heli doontaa lacagta aad siiso labadaba dhaqaale ahaan. waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarka badan adduunka halkaasoo isbedel laga bilaabi doono ”.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Metropolitan Municipal (IMM), wuxuu soo gabagabeeyey xiriiriyaashiisii ​​London, caasimada Ingriiska, isagoo la kulmay wakiilo ka kala socday xarumaha lacageed ee 22. Bed & kulan quraac ka qaybgalay daraasaddan İmamoğlu, "Beddelidda Global Outlook ee Istanbul iyo Future Turkiga" khudbad.
BİR WAXAAN AHAAN XUKUNKA ILAAHAY KHUDBADDII
Turkey iyo Boqortooyada Ingiriiska ka mid ah boqol oo sannadood waa mid aad u hufan, istiraatiiji ah, xiriir dhamaystiran İmamoğlu sheegaya maamula, carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in ay diiradda saaraan ajandaha wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. Isagoo sheegay in qof walba oo miiska fadhiya uu ogyahay muhiimadda iyo baaxadda ganacsi ee Istambul, Imamoglu wuxuu yiri, "Haddii Istanbul dal ahaan laheyd, waxay noqon laheyd mid ka mid ah waddamada ugu awooda badan xagga ganacsiga Yurub". Isagoo ku nuuxnuuxsadey inay u dejiyeen himilada Istanbul si waafaqsan baahiyaha iyo fikradaha muwaadiniinta, ayuu yiri İmamoğlu, orum waxaan rabaa inaad ogaato inaan nahay dowlad soo saareysa qawaaniinta dahabiga ah ee dimoqraadiyadda iyadoon wax shaki ah laga qabin. ” Atingmamoğlu wuxuu sheegay inuu isagu isu arko inuu yahay isu-duwaha magaalada Istanbul, saidmamoğlu wuxuu sheegay inuu danaynayo ka qeybgalka bulshada iyo maareynta daah furnaanta.
Waxaan doonayaa in aan kugula xisaabtamo dhaxalka adduunka "ISTANBUL"
İmamoğlu wuxuu tilmaamay muhiimadda “dareen xoog leh oo cadaalad ah, wuxuuna yiri, temel Sababta ugu weyn ee loo wadaagayo kuwan waa; lacag, maal iyo dhaqaale jecel xorriyadda, sharciga jecel, dimuqraadiyada jecel. Kuwan la'aantood, waa runtii waa dhab inuu ka shakin doono dareenka dhaqaalaha iyo dhaqaalaha. Xitaa wadamada adduunka ee u maleeya inay leeyihiin dimoqraadiyad aad u horumarsan way la soo kulmeen waxayna waqti ku xanuunsan doonaan magaca dimoqraadiyada. Laakiin waxa halkan muhiimka ah waa go'aan ka gaarista bulshada. Waxaan ku faani karaa odhan karaa go'aankan; Waxaan halkan uga hadlayaa anigoo ku hadlaya magaca 16 milyan ee reer Istanbul ah ee u soo gudbiyey qaabab dimuqraadiyadeed, habab iyo faham adduunka ah. Tani waa bilow cusub oo Jidka socodka in ay a, aad ilaha ugu awooda badan mid kasta oo idinka mid ah, aad uga go'an tahay waa mid ka mid ah dalalka ugu badan aduunka ee quruxda badan ee naga Turkey, weli juqraafiga ugu quruxda badan dunida iyo taariikhda xoog dhaxal ahaan dunida,, waxaan dhab ahaan doonayaan in aad noo soo raaci on our qurux İstanbul'umuzda aaminteen. Waxaan u maleynayaa inay murugo yar tahay in laga tago sanadaha soo socda
METRO MUUQAALADA METRO ”
Isagoo tusaale ka bixinaya maalgashiga ay rabaan inay sameeyaan, gaar ahaan tareenka dhulka hoostiisa mara ee Istanbul, ayuu yiri İmamoğlu, imiz Mashaariicdayada mitrooga hadda jira waa wadada safarka. Waxaan hadda rabnaa inaan si dhakhso leh u kordhinno shabakadeena tareenka ee 220 kiiloomitir oo ka sarreysa kiiloomitir 5 oo sanadka gudihiisa ah. Qiyaastii kiiloomitir 600 kilomitir ayaa horey usocday. 200 wuxuu jeclaan lahaa inuu dhiso khadad metro cusub oo kiiloomitir ah ”. Imamoglu wuxuu kaloo la wadaagay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mashruucyadiisa sida tikniyoolajiyada, magaalada caqliga leh iyo qiiqa kaarboonka hooseeya wakiilada hay'adaha maaliyadeed. Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay jiraan mashruucyo bulsheed oo diiradda saaraya aagga cagaaran iyo dadka, wuxuuna sheegay in 200 ay u soo bandhigi doonto '1 creche' adeeggii dadka Istanbul sanadka gudihiisa. İmamoğlu wuxuu yidhi, olarak Anigoo ah magaalo weynta magaalada Istanbul, waxaan jeclaan lahaa inaad sawirkan u aragto degmo magaalo leh miisaaniyada isku-darka oo qiyaastii ah 150 bilyan Euros. Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu firfircoon maalgashiga, kobcinta fursadaha, leh awood sare waxaadna heli doontaa lacagta aad ku siiso dhaqaale isla markaana isbedelku wuxuu ka bilaaban doonaa cabirka adduunka. ”
Guul darrooyinkii mitrooga, Shilalka ka dhacay Magaalada busmamoğlu…
Wadada tareenka ee loo yaqaan 'BTK train' oo furan ... Tareenka ka baxaya London ...
Qeexaan Habka Isgaadhsiinta ee London
ISBAK Inc. ayaa London ka soo laabtay iyadoo abaalmarin ah
Kordhinta Khadka Tooska ah ee Rabat Sale Tram ee Caasimadda Morocco…
Maalgelin isku dhafan oo lagu sameeyo Kanal Istanbul
Fidinta Tram Line-ka Rabat, Caasimadda Morocco ...
TCDD's 10 QMS Heshiiska Maalgelinta Heshiiska ayaa saxiixay
Bilyan 4 Mashruuca Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare ee Gaarka ah ee Shiinaha…
500 million Euros Turkiga ka Bangiga Adduunka Maalgelinta
Tilmaamaha Dhismaha Istaraatiijiyada ee Istanbul
Safarrada dhulka hoostiisa ee loo yaqaan Burburkii ka dhacay Istanbul…
Maqnaanshaha Metro ee Istanbul Sababta, Suuqa ayaa ku noqday caadi
Metro Istanbul, 2 Ku-guuldaraysiga Khadka…
Shabakadda tareenka ee Istanbul
Mashaariicda Metro ee Istanbul
khadadka metro istanbul